Intengo yomklamo wangaphakathi - Umklami wangaphakathi we-Architect Bucharest - Indlu yokwakha yangaphakathi Constanta - Nobili Umklamo wangaphakathi, studio, umklami, umklami, izinkampani, ukuklama, amanani
Izinsizakalo zezinsizakalo zangaphakathi
An project design ingaphakathi kuhilela udala ngokwezifiso umqondo, ehlukile amaklayenti ngamunye, ngakho uma wazithola design isitayela kuphothifoliyo yingoba zihlukile, umuntu ngamunye uhlukile ngendlela yalo futhi ngokwezifiso design iphrojekthi ukuthi sizodala ngawe ngokuqinisekile ngeke ezwakalisa ngokugcwele ukuphila kwakho ubuntu bakho.
Isinyathelo sokuqala - asibize noma uthumele i-imeyili amapulani wokwakha ukuthi ufuna ukuhlela ukuthola i nikela ngesikhathi lemfisha ongoti bethu uzokuthinta for ingxoxo eningiliziwe futhi mhlawumbe ukusungula umhlangano.
Izinhlinzeko zamanani zephrojekthi ye-3D zenziwe ngabanye futhi zihlelwe ngokuya phezulu nesitayela esiklanyelwe ukuklama. Ngezinye sizoxoxa ezindabeni imininingwane ephathelene indawo ye igumbi ngalinye umhlangano wokuqala, sikhomba isitayela Izinsiza zomphakathi futhi emva inkontileka bazovakashela indawo zingahlelwa sokuhlola Ubukhulu imidwebo sokuqala nemigwalo irekhodi elisha ingabe izinguquko iziqephu.
Ukudalwa kanye nomklamo project design kudinga amahora amaningi umsebenzi odinga isineke ngempela, ukutadisha zincwadi eziningi kusukela lapho thina ukhethe imikhiqizo ilungelo isitayela sifaneleka ngokukhethekile hhayi okungenani isabelomali esifanele imikhiqizo iklayenti ukuthi incadrandu- sizobe sibanikeza iklayenti ukuze umphumela we-design yangaphakathi uzobe ufana ncamashi nephrojekthi ye-3D.
Sinikeza amaklayenti ethu ukwesekwa okudingekayo ukuze basebenzise iphrojekthi yokuklama ukuze bakwazi ukukhetha enye yamaphakheji wenkonzo amathathu adalwe ngokuvumelana nezidingo zabo.
I-Nobili Pro INKONZO YOKUTHANDA YOMSEBENZI (umqondo we-3D womuntu siqu, imephu yephrojekthi, ukunikela ngezinto)
- Izindlu, izindlu zendawo zanamuhla zithengisa i-14-19 euro / sqm, kuye ngokuthi yikuphi kanye nohlobo lwendawo yokuhlala.
- Izindlu, ama-villas ayingqayizivele amanani angu-16-22 euro / sq m, kuncike kubuso kanye nohlobo lokuhlukanisa.
- Izindawo, ama-studios amanani angu-20-30 euro / sqm kuye ngokuthi isakhiwo nesitayela esikhethiwe.
Ukuhlela futhi isikhala nokwenza, 3D design, ifenisha design, izithombe photorealistic, ibalazwe design (imidwebo 2D nge ukufaka kagesi kanye enelanga, imidwebo 3D nge Uphahla lwangaphakathi ifenisha creat- isikali nemidwebo wadala, repartitioning, njll Intengo izinto bona -kusetshenziselwa iphrojekthi, izinto esizihlinzeka ngokuqondile).
I-PREMIUM INTERIOR DESIGN SERVICE (KEY) - amanani Ngesicelo
Ukuhlela futhi isikhala nokwenza, 3D design, ifenisha design, izithombe photorealistic, ibalazwe design (imidwebo 2D nge ukufaka kagesi kanye enelanga, imidwebo 3D nge Uphahla lwangaphakathi ifenisha creat- isikali nemidwebo wadala, repartitioning, njll Ofeta intengo izinto wena -kusetshenziselwa iphrojekthi, izinto esizihlinzeka ngokuqondile).
Ukuphathwa kweprojekthi okubandakanya:
izivumelwano -Ukuze yokwakha Ingaphakathi uma kukhona kakade ifemu design uzibophezele ekusizeni futhi lokuhlela umsebenzi esizeni (izinyathelo zokuhlela ukusebenza, kokuhlola kanye nokuqapha umsebenzi ukuze kuhlangatshezwane design project).
-Ukubonakaliswa kwabakhiqizi befenisha ngokulandelana (ukulandelela nokuhlola ukukhiqizwa kwefenisha ukuze kugcinwe umqondo owadalwa kanye nefenisha lobuchwepheshe ephrojekthi yokuklama).
-Imidwebo yefenisha e-Italy, ukulandelela ukulethwa nokufakwa kwefenisha eyala.
-Ukulethwa kwezidingo nokufakwa kwazo zonke izinto ezongezwe kuphrojekthi.
Ukuze ukwazi ukuphendula izicelo zamakhasimende ethu kusuka kwamanye amadolobha ezweni nakwamanye amazwe sidale:
- amanani 14-19 euro / sqm izindlu, villas zanamuhla.
- 16-22 euro mp izintengo zezindlu zakudala.
- amanani 22-35 euro / sqm yezindlu, ama-studio.
- Thumela izakhiwo nezithombe kusuka ngaphakathi kuya ekhelini le-imeyili okukhulunywa ngalo kusayithi.
-Ngesikhathi esifushane uzothola ukunikezwa kwentengo futhi uzoxhumana nomxhumanisi wenkampani ozochaza ukuthi le nsizakalo isebenza kanjani.
-Ngemva kokuwamukela isipho sakho, uzothola ifomu elenziwe ngokwezifiso ozodinga ukuligcwalisa bese ulithumela ngeposi. Leli shidi lidinga imininingwane ekuya kukamelweni ngalinye, isitayela somhlobiso okhethiwe neminye imininingwane eminingi ezosisiza ukuba sicabange ngokuqondile lokho okufunayo.
-It kudala isikhala sakho e 3D (ongakasetshenzwa) bese sizokuthumela imeyli 3D imidwebo ngawe ukuqaphela futhi uhloniphe ukwahlukanisa ke ilungiselelo uzosebenza 3D isikhala. Kulolu suku, sizoqhubeka sixhumana ngocingo kanye ne-mail ukuze sihlanganyele eduze futhi sithole imiphumela engcono kakhulu.
iphrojekthi -Uma usulungile, uzothola eposini Isigaba sokuqala 3D imidwebo bese, ngemuva kokwamukela iphakethe yizithunywa ukuthola ifolda iphrojekthi equkethe yonke idatha kuyadzingeka ekwetfulweni kwaloluhlelo yephrojekthi (imidwebo 2D nge ukufaka kagesi kanye enelanga, imidwebo 3D nge Uphahla lwangaphakathi ifenisha isikali creat- nemidwebo wadala, repartitioning, njll ofeta intengo izinto esasiyisebenzisa izinto iphrojekthi oyinikezayo ngqo). Noma yiziphi izinguquko ongafuna ukuzenza kule phrojekthi yethu ehlongozwayo azidingi izindleko ezengeziwe. Sigcina uxhumene futhi sizokusiza ukusebenzisa design phrojekthi ukuze umphumela kuzoba njengoba 3D phrojekthi ukulungela kwethu ukusekela ukuthuthukiswa inkampani leyo ezosebenzela phezu kwayo ngokunikeza izinto ozisebenzise esikhathini 3D phrojekthi. Kungakhathaliseki uhlobo ingaphakathi design iphrojekthi obakhethayo (ekhaya, villa, efulethini, ehhotela, restaurant, bar, esitolo, umtholampilo wezokwelapha, ubuhle salon wezinwele) siqhubekela nendawo yakho ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe okunikezwayo okufakiwe kuze kube nomqondo design yangaphakathi 3d. Ekuphetheni, ngisho ngabe eCluj Napoca, Timisoara, Oradea, Arad, Sibiu futhi Hunedoara uzokhokha intengo efanayo umklamo iphrojekthi njengekhasimende e Bucharest, Constanta, Giurgiu, Calarasi, Galati, Tulcea, Craiova, Brasov futhi Prahova . Oxhumana nabo befoni: 0720.665.365
Amasevisi inkampani design elingaphakathi, wezakhiwo bayikhiphe 3d, ingaphakathi, izindlu zakudala, yesimanje, izintengo kusukela 17 euro imitha (yokugcina sipho intengo ye design amaphrojekthi angaphakathi ibalwa ngenani of square metres eyakhelwe, akukho. Of amakamelo isitayela ukukhethwa nokuba yinkimbinkimbi iphrojekthi ngaphansi ukuqaliswa) e Constanta, Bucharest, Ploiesti, Brasov, Pitesti, Galati.
Isigaba Isihloko inkonzo design ingaphakathi, design elingaphakathi, inkampani, ihhovisi, indlu, zakudala, yesimanje, cottage zakudala ingaphakathi design amanani, zokudla, nemishayo, amathilomu, amahhotela, emahostela, izitolo, uyisicukuthwane ingaphakathi amasevisi design, ukuklama, ubungcweti 3d , Bucharest, Constanta, Brasov, Pitesti, Ploiesti, Galati, Cluj, Timisoara, abaklami bamapulani ingaphakathi njalo, ubungcweti njalo, nabaqambi izindlu Uhlelo Lokufaka Lwe- intengo ehlala njalo.
Intengo yomklamo wangaphakathi - Umklami wangaphakathi wezakhiwo waseBucharest - Ingaphakathi lokuklama izindlu Constanta
Ngenxa yokuthi impumelelo yeprojekthi yangaphakathi yokuklama iqinisekisiwe, icela ukuthi izinsizakalo zenkampani yangaphakathi yiklanyelwe yisinqumo esihle kakhulu. Izitayela zokuklama zangaphakathi zihlukile futhi zinezici ezithile, futhi iklayenti ngalinye lifuna ukufaka izigxivizo zeminwe yakhe ekuhlelweni kabusha noma emhlobiso wendlu yakhe, indlu noma indlu. Ngakho Noble Ukuklama kuwukukhetha ephelele yamaphrojekthi design sokukhomba commercial (restaurant, bar, ehhotela, izingubo esitolo, salon Hairdressing, umtholampilo wezokwelapha) noma Rezindential (izindlu, zokuhlala). Ukuba abaholi emakethe kusukela 2008 futhi phezu 250 amaphrojekthi elingaphakathi design kanye yezakhiwo lwenteke enkulu yasemadolobheni amakhulu yeRomania futhi Bucharest, Constanta, Brasov, Ploiesti, Craiova, Giurgiu, Galati, Braila, Tulcea, Calarasi, Bacau, Suceava , Focsani, Vaslui, uyisicukuthwane design ingaphakathi uphakamisa izixazululo ukhiye kanye nokuqaliswa kuwo wonke amaphrojekthi design ingaphakathi esiyingqayizivele. Ngamunye isikhala yendlu noma villa ufuna ukuhlela kumele kufake ekhatsi izakhi nobuntu isitayela design ingaphakathi ngayingcwelisa ukumela izintandokazi ngokuya izakhiwo kanye design ingaphakathi. A isitayela zakudala elingaphakathi design kudinga evulekile chromatique njengoba ifenisha lokhuni esenziwe Italy, i-flooring ukhuni izesekeli kuphela ububanzi okhethiweyo abakhiqizi phezulu kanye nabaphakeli eYurophu. Ama-luminaires amakhulu afana namakhansela noma ngisho namacembe okuhlobisa kanye neminye imininingwana encane enika phambili ekulungiseni isitayela seklasini yokuklama yangaphakathi. Ikhwalithi yokuqedela izokuqinisekisa ukuqina kwezinto ezenziwe kulolu hlobo lwenklamo yangaphakathi kanye neprojekthi yokwakha yangaphakathi. Yiqiniso, ukhetho ngalunye luzosekelwe ezinkambisweni zezimali zekhasimende kanye nokuthandayo. Kanye nabadwebi kanye nabaqambi ku-Nobili Interior Design, ikhasimende lizokwazi ukubuka iphrojekthi ye-design yangaphakathi ye-3D ngaphambi kokuthi isetshenziswe. Uma sekukhanyisiwe ukukhanya okuluhlaza, izazi zizoqala lo msebenzi wokuklama wangaphakathi, zibonisane nomklayenti ozobuzwa kulo lonke iphrojekthi. Architects ekuklanyweni kanye ingaphakathi design niqinile izogxila ukudlala isikhala sokusebenza ngaphezulu njengoba noma yini ofuna ukuhlela indlu, ifulethi, ehhotela, restaurant, esitolo noma beauty salon. I-Nobili I-Interior Design iyinhlangano enekhono elinamakhono akhe okukhethekile aphezulu kakhulu futhi umphumela wokugcina uzokumangaza. Sithumelele nge-imeyili (nobilidesign [@] gmail.com) I-2d imidwebo namagama ambalwa mayelana nokuthi ufuna ukubuka kanjani ikhaya lakho noma ibhizinisi lakho. Izindleko ezilinganiselwe Izinsizakalo zangaphakathi zokuklama izintengo: Izakhiwo zangaphakathi zokudweba izindlu zesitayela ze-price 16-22 euro sq ft ngaphandle kwe-VAT. Izakhiwo zangaphakathi zesitayela zesitayela zanamuhla amanani asuka ku-15 kuya ku-19 euro sq ft ngaphandle kwe-VAT. Izakhiwo zangaphakathi zendawo yokudayisa indawo yokuthenga 14 - 25 euro sq. Ngaphandle kwe-tva. Intengo yenani lezakhiwo zangaphakathi ihlukile ngokusho kwesitayela esikhethiwe, ukuhlukanisa kanye nenani lamakamelo, ubunzima nezidingo zephrojekthi. Umklami wezakhiwo ongaphakathi nomklami uGabriela Nechifor.
Imisebenzi Yomklamo Wezingaphakathi Interior Nobili Design Interior
Izinsizakalo zethu zangaphakathi zokuklama zixhomeke ezidingo zomthengi kanye nombono womklami wezobuchwepheshe. Nge iqembu ongoti ehlanganisa wezakhiwo, umklami ingaphakathi, Ingaphandle, umklami ifenisha elitholakala ngemva iphrojekthi ngayinye izoba sithole iseluleko esingcono kakhulu futhi izixazululo umklamo ingaphakathi indlu, ifulethi, noma villa, kungakhathaliseki ukuthi idolobha lapho ukhona. Amanani 3D ingaphakathi design iphrojekthi iqala ngo 17 euro / sqm, obuhlukahlukene kuye endaweni amakamelo, isibalo amakamelo ukusethwa futhi Yebo kwangaphakathi design okukhethayo. Isitayela ngasinye sokuklama sidinga ukusebenzisana, ukubambisana, kanye nezeluleko ezivela ochwepheshe endle.